Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Boeing kwupụtara mgbanwe na Board of Directors ya
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Boeing na -ahọpụta David L. Joyce ka ọ bụrụ Board of Directors; Admiral Edmund P. Giambastiani Jr. ịla ezumike nka na Board.
David L. Joyce hoputara onye isi oche nke Boeing.
Admiral Edmund P. Giambastiani Jr. lara ezumike nka na Boeing Board of Directors.
Mgbanwe ndị isi oche Boeing na -amalite ozugbo.
Ndị isi ụlọ ọrụ Boeing Company taa kwupụtara na David L. Joyce ka a họpụtara ka ọ bụrụ onye isi oche, na -amalite ozugbo. Ọ ga -eje ozi na kọmitii nchekwa na nkwụghachi ụgwọ Aerospace. Ndị isi Boeing taa kwuputara na Admiral Edmund P. Giambastiani Jr. agwala ụlọ ọrụ ahụ na ọ ga -ala ezumike nka na bọọdụ na njedebe nke 2021.
David L. Joyce hoputara onye isi oche nke Boeing
Otu onye isi ụgbọelu na -arụ ọrụ nke ọma, Joyce, 64, lara ezumike nká General Electric (GE) dị ka osote onye isi oche na 2020, ebe ọ rụkwara ọrụ dị ka onye isi ala na onye isi oche nke GE Aviation site na 2008 ruo 2020. N'ime afọ iri na abụọ ọ na-edu nnukwu ngalaba GE, Joyce durukwara ndị ahịa na nkwado ngwaahịa maka ihe karịrị 12 injin ụwa na ndị ahịa ụgbọ elu 19,000. ma lelee mmejuputa sistemụ njikwa nchekwa nchekwa ụlọ ọrụ n'ofe GE Aviation.
Onye agha GE afọ 40, Joyce sonyeere GE ụgbọ elu na 1980 dị ka injinia ngwaahịa wee nọrọ afọ 15 na -echepụta ma na -azụlite ngwa ahịa na ngwa agha nke GE, tupu ọ na -eje ozi n'ọkwa ndị isi dị iche iche na GE Aviation, gụnyere osote onye isi ala na onye isi njikwa azụmaahịa azụmahịa. Joyce nwetara nzere bachelọ nke sayensị na nzere masta na injinị injinịa site na Mahadum Michigan State wee nweta ego nke nna ukwu na mahadum Xavier.
David Joyce bụ onye ndu ụlọ ọrụ aerospace a ma ama nke na -ewetara ndekọ nchekwa nke onye ndu nchekwa, nka injinịa na ọmarịcha arụmọrụ na bọọdụ anyị. Boeing Onye isi oche Larry Kellner. "Ọ ga -enye ndụmọdụ na ndụmọdụ bara uru dabere na ahụmịhe ya dị mkpa."
Joyce bụ onye otu National Academy of Engineering, ọ bụkwa onye nnata onyinye nturu ugo ndu James Forrestal Industry Association nke National Defense Industrial Association na Medal Society of Materials 'Medal for the Advancement of Research. Kemgbe 2010, ọ na -eje ozi na Kọmitii Nlekọta Mahadum Xavier.
"Boeing ga -erite uru na ahụmịhe ụgbọ elu miri emi nke David Joyce na mmekọrịta ụlọ ọrụ sara mbara, "David Calhoun, onye isi Boeing na onye isi oche, na onye otu ndị isi oche kwuru. Ahụmịhe David na -agbanwe azụmahịa na -elekwasị anya na ịdị mma na nchekwa na ụlọ ọrụ aerospace ga -ewusi bọọdụ anyị ike. "
Njem Virgin na -aga ugbu a na Nassau na Bimini
Na -eme ngwangwa mgbake na New World na ihe omume ụgbọ elu ...
Wizz Air ga -ebido ụzọ ụgbọ elu 8 ọhụrụ na -aga Jọdan
Ọdụ ụgbọ elu Manchester-Boston na Myrtle Beach…
Njem nlegharị anya Saudi Arabia na ozi dị mkpa na Italy
Akwụsịla ọgwụ mgbochi Moderna COVID-19 na Japan ka ọnwa abụọ gachara…
Ụgbọ elu helikọpta na ụgbọelu dara n'etiti Arizona na -egbu ...
Ndị ọkachamara n'ọrịa shuga na ụlọ ọrụ AI na -aga Guam
A matara onyeisi oche Sandals® Resorts dị ka Global ...
Ọtụtụ ụmụ amaala UAE nọ na ọkwa ọhụrụ na Emirates ...
Aeroflot chọrọ ka enye ndị ọkwọ ụgbọelu ọgwụ mgbochi
Lufthansa rụzuru mmezu nke ...
Solomons na -eme njem nlegharị anya na -eru uju ọnwụ onye isi ala Josefa Tuamoto
Ụgbọ elu si Bangkok ruo Samui, Chiang Mai, Phuket ...
N'ọkụ: Nnukwu ọkụ malitere n'ọdụ ụgbọ elu Kabul
Iwe na mgbochi mgbochi na -etolite
Ụgbọ elu si Kazakhstan na Maldives na Air Astana…
Hawaii kachasị njọ na US maka anụ ụlọ na-eme enyi ...
Ụgbọ elu Kigali na Doha na -akwụsịghị akwụsị ugbu a na Qatar Airways…
Ndị njem na ndị bi ebe ahụ ga -egosi ule vax/negative ...
Ndị ọrụ Alitalia na -arụ ọrụ n'efu
SAUDIA chiri ụgbọ elu kacha mma n'ụwa ...
Okporo ụzọ ndị njem na ọdụ ụgbọ elu dị na Ireland mụbara 230%
Ịzụta amụma mkpuchi ahụike? Echefula ihe ise
Ụbọchị Njem Nleta Ụwa na Google
Ọmarịcha agwaetiti La Digue
Ndị otu ụlọ omebe iwu nke United States gbara ume ka enwe nnọkọ na ọdụ ụgbọ elu na -eji ...
Ọnye na -bụ Donald Wright, VP ọhụrụ maka ụgbọ elu Alaska?
Mgbasa Ozi Wizz Air nwere ike ịmị mkpụrụ
Ozi Ọhụrụ: Kwalite njem gaa ndị Afrịka America
john jenkins ekwu, sị:
September 1, 2021 na 02: 46
Maazị Joyce bụ nhọrọ kacha mma site n'aka ndị isi Boeing. Mmụta ya na ahụmịhe ya ga -enyere ya aka itinye aka na mkpebi mkpebi Boeing. Ana m aja Boeing mma maka nhọpụta a, n'adịghị ka ọtụtụ nhọrọ ndị otu Board nke emere naanị maka ebumnuche ime ihe. Ọrụ ụlọ ọrụ America dị mkpa maka ijigide akụ na ụba anyị na nchekwa mba.